Sida loo sameeyo barbecue lagu guuleysto iyo dhadhanka qof walba | Ragga Stylish
Talooyin ku saabsan samaynta hilibka dubista
Xagaagu waa waqtiga ku habboon in la cuno hilib dubis. Waqtiga iyo tamarta aan ku haysanno awoodeena ayaa jecel waqtiyada wanaagsan ee kuwa aan jecel nahay.
Si kastaba ha ahaatee, sameynta hilib dubid ma sahlana sida shidida dhuxusha iyo ku darida xoogaa hilib ah si aad u kariso.
Waa lagama maarmaan in la helo urur wanaagsan, qaab iyo farsamo, si ay munaasabaddu u noqoto mid waayo-aragnimo fiican u leh qof walba, daqiiqad gaar ah oo lagu raaxeysto martida.
2 Sii noocyo kala duwan
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo ayaa ah qorshee dhacdada. Waxaad ubaahantahay inaad sameyso liistada martida iyo liiska. Waxaa ugufiican in la xisaabiyo 350-400 gr oo hilib ah martidiiba, halkee ku dar noocyada kala duwan ee hilibka la kariyo.
Badanaa waxaa jira chistorras, sausage dhiig, chorizo, digaag (baalal ama bawdo), ribeye, feeraha doofaarka, wan ama hilib lo'aad iyo, dabcan, hilibka lo'da.
Sii noocyo kala duwan
Waa inaan taas xaqiijino menu wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo dhadhan iyo dhadhan ah. Waa muhiim khudaarta ku dar. Tani waa xaaladda baradhada, basasha, yaanyada ama aubergines, iyo sidoo kale miraha ama jiiska.
Waxaan ubaahanahay inaan xasuusano dalooli khudaarta, si looga hortago inay qarxaan. Kala duwanaansho kala duwan ayaa la samayn karaa, oo leh qaybo khudaar ah, ama miraha, si ay u awoodaan inay yeeshaan qarax dhadhan.
Si loo xakameeyo cunto karinta ay cunnadu hesho, waa waxtar u kala qaybi qaybo yaryar. Tusaale ahaan, waxaan raadin doonnaa noocyada ugu habboon ee jarista, nooc kasta oo hilib ah. Maxaa intaa dheer, waan hubin doonaa kari markii dhuxushu caddahay, oo aan olol lahayn.
Waxaa lagu talinayaa isticmaal maro gaar ah iyo maacuun si loo dubto, si loo xakameeyo.
ka hilibka waa inuu ahaadaa heerkulka qolka, marka la gelinayo dabka. Intaa waxaa sii dheer, waxaa lagugula talinayaa inaad xilli kuleyliso inta ay wax karinayaan, maadaama ay helayaan dhadhan ka weyn. Tan waxaan u isticmaali doonaa cusbo aan badnayn, dhir udgoon iyo xawaash kuwaas oo ku daraya caraf udgoon, sida rosemary, ama basbaas.
Iyada oo wehel u ah hilibka, waa la samayn karaa suugada guriga lagu sameeyoAdiga oo adeegsanaya mowduucyo dalal kala duwan ka yimid, tusaale ahaan, samee maraqa kulul ee Mexico. Miyayna ilaawin martida sii cabitaano kala duwan, aalkolo iyo kuwa aan aalkolo lahayn.
Ilaha sawirka: Pasto y acorn / dbarbacoa.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Talooyin ku saabsan samaynta hilibka dubista
Jalaatada miyey kaa dhigeysaa mid buuran?
Waa maxay fungi, sida looga fogaado?